बस यातायातमा सुधार होला ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / बस यातायातमा सुधार होला ?
बस यातायातमा सुधार होला ?
Posted by: युगबोध in विचार 10 days ago	0 26 Views
बस यातायातका संस्थाहरु धेरै छन्। दाङ जिल्लामा कम्पनीहरु भएपछि बसहरुको संख्या बढ्छ, यातायात सहज बन्छ भन्ने सोचाइ सरकारमा बस्नेहरु र राजनीतिक दलहरुको थियो। संघ, संस्था र समितिबाट चल्ने वसहरुलाई सिण्डिकेट भनियो। त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई सरकारले दुव्र्यवहार गयो। तर बस चलाउनेहरु यातायात व्यवसायीहरु हुन् भन्ने बुझाइ सरकारलाई भएन। कर ठग्ने प्रालिहरुलाई सरकारले टेवा दियो, प्रोत्साहित गयो। तर वस व्यवसाय सञ्चालनमा प्रणाली, नीति र व्यवस्थापन गर्न सकेन। अद्यापि गरेका उदाहरणहरु छैनन्।
जब वसहरु दुर्घटनामा परे तब मात्र सरकारलाई थाहा भयो कि दुर्घटनाको समाधान कसले गर्ने ? यातायात क्षेत्रमा सरकारले गरेको खैलाबैलाको वातावरण अद्यापि शान्त भएको छैन। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भयो। यातायात व्यवसायी र यातायात समितिलाई बुझ्न नसक्नु सरकारका मन्त्रीहरुको अवोध ज्ञान हो। सरकारले आपूmले बनाउने सडकका कारण वर्षेनी मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ। २०÷२१ वर्षसम्म पनि ठेकेदारले सडक बनाउन्न। सरकारले लाजै नमानेर म्याद थप्दै कमिशन बा“ट्दै गरेका दृश्यहरु छन्। सरकार भन्दा ठूला व्यक्ति ठेकेदारहरु भएपछि उनीहरुले सडक नबनाएको रिस मन्त्रीले यातायात व्यवसायीहरुमाथि पोखे। छेकथुन गरे। अपराधीको व्यवहार गर्न प्रहरीहरुलाई लगाएको झझल्को यातायात व्यवसायीहरुले सुनाउछन्।
राप्ती सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको नाम रुपान्तरित भएर श्री त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती सेवा यातायात प्राइभेट लिमिटेड भएपछि दाङ जिल्लाका प्रालिहरु सबै एकै खाले भए भन्छन्। तर सबै प्रालिहरुको हैसियत भने फरक–फरक प्रकृतिको छ। यो संस्था राप्ती अञ्चलमा पुरानो र जेठो हो भने यस संस्थाबाट हुने निर्वाचनमा पराजयपछि मानसिक विचलनको परिणाममा परेकाहरु यस संस्थामा बस्न नचाहेर प्रालि खोलेका हुन्। तर आफ्नो हैसियत देखाउन सकेका छैनन्। सरकारी टेवाको आशामा छन् र भन्छन् हामीलाई प्रालि खोल्न लगाएको वर्तमान सरकार हो। आपसमा झगडा गर्न लगाउने काम सरकारबाट भएको सुनाउ“छन्। यसबाट एक आपसमा तनाव बढाइयो। यातायातमा सिष्टम, नीति र व्यवस्थापन सरकारबाट भएन। यातायातका साधानहरुमा कर बढाएर व्यवसायबाट पलायन हुने वातावरण बनाइयो। नागरिकहरुलाई यसबाट स्वरोजगारको वातावरण बनेन। सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुको जवाफदेहीता र पारदर्शिता बन्न सकेन।
व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय छोड वा मरको अवस्था बन्यो। सरकार दुई तिहाई बहुमतको भए पनि यातायात व्यवसायीहरुप्रति सहानुभूति देखाउने व्यवहार भएन। देशको विकासको मेरुदण्ड यातायात भएको थाहा पाएनन्। यात्रुमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवहार बनाइएन। जथाभावी वसहरु भिœयाएर सडक जाम हुने गराइयो। नया“ वसहरु भित्रिन सकेनन्। प्रालिहरुले पुराना वसहरु भिœयाएर यात्रा जोखिमपूर्ण बनाए। त्यसैले होला सडक दुर्घटनामा दाङ जिल्ला अग्रपंक्तिमा पर्छ। यहा“का सडकहरुको अवस्था नाजुक छ। साधनहरु तीब्र गतिमा चलाउने चालकहरुको आदत बनेको छ। त्यसकारण दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरवाही भन्छन् ट्राफिक प्रहरीहरु। तर उनीहरुको भनाइ पुष्टि हुन सकेको पाइन्न।
त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती सेवा यातायात प्रालिबाट सञ्चालित सवारी साधनहरुको प्रणाली नीति र व्यवस्थापनमा अझ बढी प्रभावकारिता ल्याउन उपाध्यक्ष पुस्कर धितालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। जसमा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु र वस व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ। उक्त समितिमा संयोजक पुस्कर धिताल सदस्यहरुमा नारायण न्यौपाने, मीनप्रसाद भट्ट (प्रकाश), प्रेम रावत, दिवाकर केसी, हरिप्रसाद भट्ट (राजु), कृष्णप्रसाद रेग्मी, मूर्तिप्रसाद गौतम (शिवहरी) र सेवकराम डा“गी भएकोले जिम्मेवारी जवाफदेहीता र पारदर्शीता हुनेमा व्यवसायीहरु विश्वस्त छन्। यदि यो उपसमितिबाट यस प्रालिद्वारा सञ्चालित सवारीसाधनहरुमा सुधार भएन भने पुरानो राप्ती सार्वजनिक यातायातको महत्व देखिनेछैन। कार्यसमितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई समेत सुम्पिएको कार्यहरु प्रभावकारी बन्ने आशा अध्यक्ष सुरेश हमालको छ। उहा“ले यातायातमा सुधारका लागि पहिले मेरो बसबाट शुरु गर्नोस्। नम्बर क्यू कहा गर्न परे पनि गर्नोस्। बसहरु जे जति छन् तिनीहरुलाई मर्मत गर्न व्यवसायीलाई लगाउने एसी र डिलक्सहरुलाई हाम्रो मापदण्ड अनुसार बसहरुमा व्यवस्था मिलाउने भाडामा वार्गेनिङ नगराउने यात्रुमैत्री वातावरण बनाउन प्रणाली नीतिनियम र व्यवस्था गर्ने गराउने अधिकार सम्पन्न उपसमिति भएको अध्यक्ष सुरेश हमालले निर्देशन दिनुभएको व्यवसायीहरु सुनाउ“छन्। राम्रो बसमा निलो स्टीकर र खराव बसमा रातो स्टीकर टासिनेछ। यात्रुहरुले बसको स्टीकर हेरेर टिकट लिनुपर्ने प्रविधि अपनाइने भएको छ। यसबाट यात्रुहरुलाई यात्रामा सरलता, भरपर्दो र आरामीको वातावरण बन्नेछ। तर व्यवसायीहरु भन्छन्– यस उपसमितिका पदाधिकारीहरुका बसहरु व्यवस्थित छैनन्। यिनीहरुले कसरी सुधार गर्लान् ? सोचनीय छ। सुधारको पर्खाइमा छन्। जबसम्म पदाधिकारीहरुबाट परिवर्तन हु“दैन तबसम्म यातायातमा सुधारका प्रयासहरु दिवास्वप्न बन्छन्। यो रोगको समस्या राप्ती समितिमा पाइन्छ। रोगलाई उपचार विधि अपनाउन संयोजकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
हुन त सदस्य कृष्णप्रसाद रेग्मी भन्छन्– काम गर्ने वातावरण बनेन र कामको टीम स्पीड मिलेन भने म कदापि बस्दैन। राजिनामा गर्छु।
सरकार सञ्चालकहरुले यातायातमा भएको आलोपालो प्रणालीलाई सिण्डिकेट भनेर प्रालिहरुको अवधारणा ल्याए पनि सार्वजनिक सवारीहरुमा यात्रुमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान गएन। यातायात मन्त्रीले प्रणाली नीति, नियम र व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने प्रविधिहरु भिœयाउन सकेनन्। तर त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती सेवा यातायात प्राइभेट लिमिटेडले बस मालिकहरुको लागि दश लाखको बिमा बनाएको छ। बसहरुको थर्डपार्टी बिमा जा“च पास रुट परमिट म्याद थप कर भुक्तानी ब्लुबुक रिन्युजस्ता काम पनि कार्यालयले गर्छ । लाग्ने रकम पनि तिर्छ। बस मालिकले आफ्ना कागजपत्रहरु समयमा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। मासिकरुपमा बसको किसिम अनुसार रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। यसबाट व्यवसायीहरु लाभान्वित छन् र सन्तुष्ट छन्। पूर्ण बिमाका गाडीहरु कार्य समितिबाट मर्मत हुन्छ। बस मालिकले खर्च व्यहोर्नुपर्दैन। यो काम दुर्घटना भएका गाडीहरुलाई गरिन्छ। कुनै पनि प्रालिस“ग तुलना गर्न नसकिने यस संस्थामा छ सय १२ बसहरु (साना ठूला गरेर) छन्। यो रुपान्तरित भएको प्रालि हो। यसले धेरै बसहरु राख्न सक्छ। तर नया“ खुलेका प्रालिहरुमा एक सय भन्दा बढी वसहरु राख्न पाउने नियम छैन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो ठूलो र जेठो संस्था हो। यसबाट फुटेर गएका व्यवसायीहरु फर्केर आएका छन्। आफूले गरेको गल्ती स्वीकारेका छन्।
वर्तमान समय तुलना र प्रतिस्पर्धाको हो। कुनै पनि काम तुलनाबिना प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न। एक पक्षले सुधार गर्न प्रयास गरे पनि अर्को पक्ष निष्क्रिय भएका बखत कार्य प्रगति हुन्न। बस व्यवसायीहरुले आफ्ना बसहरुलाई सुधार गरेनन् भने उनीहरुलाई नम्बर क्यु नदिने नीति अपनाउने कार्यशैलीबाट सुधार आउला ? शंका गर्नुपर्छ। किनकि दाङका अधिकांश व्यवसायीहरुका वस स्टाफहरुले सभ्यता वोध गर्न सकेका छैनन्। कतिपय बस मालिकहरु पनि सभ्य छैनन्। असभ्यहरुको जमघट नै बस व्यवसाय भन्नेहरु पनि छन्। फ्रि भाडामा यात्रा गर्न खोज्नेहरु धेरै उच्च वर्गका व्यक्तिहरु हुन्छन्। कतिपयले होटलको भात खान माग्ने यात्रुहरु पनि हुन्छन्। निर्लज्जता प्रकट गर्ने यात्रु र सभ्यता देखाउन नसक्ने बस मालिकहरु भएकोले यातायातमा यात्रुमैत्री वातावरण बन्न नसकेको यथार्थ र सत्य हो। ट्राफिक प्रहरीहरुले विनाकारण व्यवसायीलाई जरिवाना गर्नु, सम्झाइ बुझाइ गर्न नसक्नु मानवीय व्यवहार भन्दा धेरै दानवीय व्यवहार गर्नुले पनि व्यवसायीहरु पीडित छन्। त्यस्ता पीडित व्यवसायीहरुबाट उठाएको रकमलाई धेरै राजश्व उठाइयो भन्ने ध्यान जान्न। मन्त्रीको बुझाइ छैन।
व्यवसायीहरुले मात्र सुधार गर्न प्रयास गरे पनि सरकारी निकायहरुबाट सहयोग हु“दैन। सरकार असफल भएको साझा यातायात र ट्रलीवसको इतिहास छ। सबै पक्षहरुबाट सहयोग पाएमा त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती सेवा यातायात प्रालिबाट यातायातमा सुधारको थालनी हुने व्यवसायीहरले आशा गरेको बुझिन्छ। यात्रुहरुले छानीछानी बसहरु चढ्ने वातावरण बन्नेछ। यस परिस्थितिमा आम्दानी गर्न नसकेका बसहरुले कसरी सुधार गर्लान् ? हेर्नु पर्नेछ। यात्रुहरुसग भाडा वार्गेनिङ गर्दै गरेका डिलक्स बसहरुले उपसमितिको नियम पालन गर्नेमा शंका गर्छन्– यात्रुहरु।
राप्ती सार्वजनिक यातायातको रुपान्तरित संस्था त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती सेवा यातायात प्राइभेट लिमिटेड हो। यसका वसहरु धेरै रुटहरुमा चल्छन्। ती वसहरुमा ना ५ ख ३८२५ सुपर एक्सप्रेस वस हो। जो दाङदेखि काठमाडौं मात्र चल्छ। समयमा छुट्छ र गन्तव्य स्थानमा समयमा पुग्छ। त्यो वसको कण्डक्टर मो नं. ९८४७८२५२८३ र चालकको मो नं. ९८५७८२४९९६ हो। यस्ता वसहरुको टिकट काउण्टरका कर्मचारीले थोरै संख्यामा काट्छन्। कण्डक्टर र ड्राइभरको फोनबाट बस चढ्नेहरु छन्। यो बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले यात्रुमैली वातावरण पाएको सुनाउ“छन्। तर यसमा मादक पदार्थ खाएकाहरुले धेरै सताएको हु“दा स्टाफहरुले नचढाउने गुनासो सुनिन्छ। वसको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न बस मालिकको सक्रियता आवश्यक पर्छ। स्टाफहरुको लगनशीलता, धैर्यता र सहनशीलता हुनुपर्छ। बस मालिक आफ्ना स्टाफहरुप्रति दयावान बन्नुपर्छ। बस व्यवसाय एउटा सामाजिक सेवा हो। समाजले सम्झना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
Previous: बंगलाचुली गापाको गाडीमा आगजनी
Next: अमेरिकाको अनुभव–२